जब्बर लोकबहादुरको कन्फिडेन्स कस्तो ? कुकुरलाई झुक्कायो, प्रहरीलाई कथा सुनायो अन्तत यसरि फस्यो-भिडियो सहित – Complete Nepali News Portal
ScotNepal September 20, 2021
भाद्र २१ गते सोमबार विहान एकाएक विभिन्न संचारमाध्यमा एउटा समाचार आयो । संखुवासभाको मादीमा एकै परिवारका ६ जनाको ह,’त्या । संचारमाध्यम र सामाजिक संञ्जालमा एकै छिन खबर देश विदेश सर्बत्र छरियो । जनचासो बढ्यो प्रहरी प्रशासन घ’ट्ना स्थल तर्फ दौडिए । कसरी भयो परिवारकै सामुहिक ह,’त्या गाँउमा त्रास छायो । घट्नास्थलमा प्रहरीचौकी र पछि खादवारीबाट डिएसपी लालध्वज सुवेदीको टोली पनि पुग्यो ।
प्रहरीले अनुसंन्धान सुरु गर्यो २४ घण्टा वि’त्नलाग्दा केहि पत्तो पाएन । धरानबाट अनुसंन्धानमा सहयोगी कुकुर सहितको टोली लिएर एसपी भीम दाहालपनि घ’ट्नास्थलमा पुगे । त्यसको भोलीपल्ट डिएसपी रुगम कुवंर सहितको सिआईबीको टोली पनि घ’टनास्थलमा पुग्यो त्यसपछि सुरुभयो अनुसंन्धान । यही बिषयमा सगरमाथ आरोही बिजय घिमिरेले आफ्नो बिचार राखेका छन । हेरौ भिडियो
लकडाउनमा घरमा एक्लै बस्दा मनमा फैलने अनेकौं डर, त्रास र...
१६ बर्षसम्म गोठमा जीवन बिताएका प्रकाश सपुतको रुवाउने कथा, ६...
कपूर बमले ललितालाई दिए ज्यान मार्ने धम्की,दाजुलाई गरे सुन्नै नसकिने...
भगवान् जस्ता श्रीमान बिनोदले हाम्रो जोडि मिलेसगै सबैले डाहा गरेको...
धर्ती मातालाई देखेपछि किन रुन्छन युवतीहरु ? के छ त्यस्तो...